Weather Live PRO ugbu a n'efu naanị ụbọchị 7 !! | Gam akporosis
N'ihi post m na-emelite kwa ụbọchị kwa ụbọchị n'afọ, post nke Onyinye a na-enye n'efu maka obere oge na Playlọ Ahịa GoogleM nwere obi ụtọ ịmara na-enwe ike ibudata ugwo ngwa dị ka jụụ ma zuru ezu dị ka ihe mmetuta nke ihu igwe taa ka m ga akwado.
A na-akpọ ngwa Weather Ndụ PRO, na dịka m kwurula, anyị ga-enwe ike ibudata ya n'efu na'slọ Ahịa Play nke Google naanị maka ụbọchị 7 sochirinụ. Ọzọ m na-akọwa ihe niile nke a na-enye anyị oké ngwa ihu igwe nke nwere ike ịbụ nke gị ruo mgbe ebighi ebi na-enweghị atọpụ otu Euro.
Iji malite ịtụ aro na na-atụ aro ka ha tinye njikọ a na ọkacha mmasị nke ihe nchọgharị weebụ gị, na dịka m kwurula, ekele maka post a nke a na-emelite kwa ụbọchị kwa ụbọchị n'afọ, ị ga-enwe ike ịchọpụta tupu onye ọ bụla ọzọ gbasara onyinye ndị ahụ niile na-aghọ n'efu na ngwa ngwa Google maka obere oge.
1 Download Weather Live PRO n'efu ụbọchị asaa
2 Weather Live PRO, amụma ihu igwe na ngwa ngwa ngwa ngwa
Download Weather Live PRO n'efu ụbọchị asaa
Weather Live PRO, amụma ihu igwe na ngwa ngwa ngwa ngwa
Iji malite Weather Ndụ PRO na-enye anyị ihe ngwọta dị egwu n'ụdị ngwa nke ya mara ọnọdụ ihu igwe nke ọnọdụ anyị ugbu a ma ọ bụ ebe anyị onwe anyị chọrọ ịhọrọ site na ọchụchọ maka ebe ọhụrụ.
Ngwa nke eji ezi uche nke GPS anyị ejiri csaa ebe ahụ ọbụlagodi ebe m bi ebe ngwa ndị ọzọ furu efu ma ọ bụghị naanị ịchọta m n'ụzọ ziri ezi. Ngwa nke gbakwunyere inye anyị ozi bụ isi nke ngwa ndị ọzọ nke ụdị ahụ na-enye anyị, na-enyekwa anyị ọtụtụ ozi ndị ọzọ gbasara ihu igwe na ihu igwe na eziokwu maka m bụ ndị zuru oke anyị nwere ike ịchọta taa.
Na mgbakwunye na inwe eserese eserese nke dị ezigbo mma, anyị dịkwa mma akụrụngwa dị ka ezigbo oge radar nke anyi nwere ike iji ihe omuma di iche iche dika ikuku, igwe ojii, mmiri ozuzo na snow, Okpomọkụ, Nrụgide, Ebili na ọbụna oke mmiri.
Ọ bụrụ na anyị tinye na nke a ihe dị iche iche na dị iche iche desktọọpụ wijetị, ihuenyo mara mma nke ukwuu ma bara uru, sistemụ ọkwa na ọkwa maka ihe ọhụụ na ihu igwe, anyị na-enweghị obi abụọ na mgbe niile dị ka echiche nke onwe m n'ihu otu nke kasị mma amụma ihu igwe ngwa na m nwere obi ụtọ nke na-anwale onwe na m gam akporo ọnụ.
Ekwadoro m ka ị lelee vidiyo a na-agbakwunye, video e dere na ọhụrụ vetikal format, nke n’ime ya M na-egosi gị na ihuenyo zuru oke ihe niile ngwa ahụ na-enye anyị ka ọ dị ka ọ na-enye gị mmetụta ị na-anwale ya ozugbo na ọnụ gam akporo gị, yabụ nye ya ka ị ihu na ihuenyo zuru oke ma echekwala maka ịgbanye ekwentị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Weather Live PRO ugbu a n'efu naanị ụbọchị 7 !!